Gini bu ugwo di? Kedụ ka ị ga - esi meziwanye ọnụego gị? | Martech Zone
Ọnụ ego bounce bụ otu n'ime ndị KPI ndị ahịa dijitalụ na-etinye oge dị ukwuu na nyocha na ịnwa imeziwanye. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị ghọtaghị ihe isi mmalite bụ, ịnwere ike ihie ụzọ n’otu ị chọrọ isi meziwanye ya. Aga m agagharị na nkọwa nke ọnụego bounce, ụfọdụ nuances, na ụzọ ụfọdụ ị ga - esi meziwanye ọnụego gị.
Bilie Nkọwa ọnụego
A ibiaghachi bụ otu ibe peeji na saịtị gị. Na Nchịkọta, a na-agbagha bounce kpọmkwem dị ka nnọkọ nke na-akpalite naanị otu arịrịọ na ihe nkesa Analytics, dịka mgbe onye ọrụ mepere otu ibe na saịtị gị wee pụọ na-enweghị ịkpalite arịrịọ ọ bụla ọzọ na ihe nkesa Analytics n'oge nnọkọ ahụ.
Iji tụọ ọnụego bounce n'ụzọ ziri ezi, anyị ga-ewere ọnụ ọgụgụ zuru ezu nke bounces ma wepu nleta nleta sitere na blọọgụ na weebụsaịtị ụlọ ọrụ. Yabụ - ka anyị jegharịa n'ọnọdụ ndaala ụfọdụ:
Onye ọbịa bịara na ntanetị, enweghị mmasị na ọdịnaya ahụ, wee hapụ saịtị gị. Nke ahụ bụ ibiaghachi.
Onye ọbịa bịara na peeji nke ọdịda wee pịa oku na-eme ka ịdebanye aha maka ngwa gị. Nke ahụ na-akpọrọ ha na saịtị ndị ọzọ na subdomain ma ọ bụ ngalaba dị iche iche na-agba ọsọ dị iche iche akaụntụ Google Analytics. Nke ahụ bụ ibiaghachi.
Onye ọbịa bịara na edemede sitere na nsonaazụ ọchụchọ ebe ibe gị dị ogo nke ukwuu… maka okwu emetụtaghị ngwaahịa na ọrụ gị. Ha kụrụ bọtịnụ azụ na ihe nchọgharị ha iji laghachi na nsonaazụ ọchụchọ ahụ. Nke ahụ bụ ibiaghachi.
Ihe omume nwere ike ime ka ọnụego akara lago
A na-elekarị ọnụego bounce anya dị ka ihe na-egosi nnabata onye mbịambịa mbụ njikọ aka na weebụsaịtị… mana ikwesiri ịkpachara anya. Nke a bụ ọnọdụ nke nwere ike iju gị anya:
Hazi nyocha omume na peeji nke… dị ka bọtịnụ egwu na-agbanye, ihe mpịgharị, ma ọ bụ popup div na-eme.
Mmemme, belụsọ na akọwapụtara ka a mmemme na-abụghị mmekorita, bụ na teknụzụ njikọ aka. Ndị na-ere ahịa na-agbakwunye ihe omume na ibe iji nyochaa nke ọma otu ndị ọbịa na-esi emekọrịta ihe na ibe ahụ ma ọ bụ mgbe ihe dị na ibe. Ihe omume bụ njikọ aka, yabụ n'otu ntabi anya ha na-ahụ ọnụego ibiaghachi na-adaba na efu.
Biaghachi Ọnụego na Ọnụ Ọpụpụ
Emegharịla ọnụego ọpụpụ na nkwụghachi ụgwọ. Zọ ọpụpụ akọwapụtara otu peeji na saịtị gị yana ma onye ọbịa ahụ ọ hapụrụ peeji ahụ ịga na peeji ọzọ (ebe ma ọ bụ gbanyụọ). Ibiaghachi ọnụego bụ kpọmkwem na peeji nke mbụ na a esenowo ala na n'ime nnọkọ ha butere gị na saịtị… na ma ha hapụrụ gị na saịtị ahụ mgbe ịga.
Lee ụfọdụ nkọwapụta dị n'etiti Zọ ọpụpụ na Ọnụ Ụgwọ maka otu ibe:
Maka nyocha niile na ibe, Zọ ọpụpụ bụ pasent ndị bụ ikpeazụ na nnọkọ.
Maka oge niile na-amalite na ibe ahụ, Ọnụ Ụgwọ bụ pasent ndị bụ naanị otu oge.
Ọnụ Ụgwọ n'ihi na ibe dabere na nnọkọ ndị na-amalite na ibe ahụ.
Mee ka ọnụego dị mma nwere ike ibute njikọ aka
Onye na-ere ahịa nwere ike melite ọnụego ụba ha ma bibie njikọ aka na saịtị ha. Cheedị na mmadụ na-abanye na ibe gị na saịtị gị, na-agụ ọdịnaya gị niile, ma na-ahazi otu ngosi na otu ndị ahịa gị. Ha emetụghị ihe ọ bụla na ibe… ka rutere, gụpụta atụmatụ ma ọ bụ uru ya, wee zighachi onye ahịa ahụ azụ.
Nke ahụ bụ teknụzụ a ibiaghachiMana ọ bụ nsogbu n'ezie? Ee e, ọ bụghị n'ezie. Nke ahụ mara mma ijikọ aka! Ọ bụ naanị na ụfọdụ n'ime ya mere na mpụga ikike maka nchịkọta iji jide ihe omume ahụ.
Publishersfọdụ ndị na-ebipụta akwụkwọ na-agbadata ọnụego agbada iji dị mma karịa ndị mgbasa ozi na ndị nkwado. Ha na-eme nke a site na imebisị ọdịnaya n’ime ọtụtụ peeji. Ọ bụrụ na mmadụ ga-pịa peeji 6 ka ị gụọ otu isiokwu, ị ga-enwe ike belata ọnụego ibiaghachi gị yana ịbawanye echiche gị. Ọzọ, nke a bụ ụzọ iji mụbaa ọnụego mgbasa ozi gị na-agbakwunyeghị onye ọbịa ma ọ bụ onye mgbasa ozi uru ọ bụla ma ọ bụ mbọ ọ bụla.
Usoro a bụ n'ezie aghụghọ ma anaghị m akwado ya… maka ndị mgbasa ozi ma ọ bụ maka ndị ọbịa gị. Enweghi ike ikpebi ahụmịhe nke ndị ọbịa gị site na ọnụego ibiaghachi naanị.
Imeziwanye ọnụego gị
Ọ bụrụ n'ịchọrọ iwelata ọnụego gị nke ọma, enwere ụzọ ole na ole m ga - esi akwado:
Dee ederede a haziri nke ọma na nke kachasị mma maka ihe ndị na-ege gị ntị na-achọ. Jiri Keywords jiri rụọ ọrụ nke ọma site na-eme nnyocha banyere ihe Keywords na-adọta okporo ụzọ gị na saịtị, mgbe ahu nagide ha na gị na peeji nke utu aha, post utu aha, post-slugs, na ọdịnaya. Nke a ga - agba mbọ hụ na igwe nchọta ihe na - agụpụta gị n ’ụzọ dabara adaba, ị nwere ike ịnwe ndị ọbịa ga - abanye na saịtị gị ndị na - enweghị mmasị na ibiaghachi ahụ.
Tinye njikọ dị n'ime ọdịnaya gị. Ọ bụrụ na ndị na-ege gị ntị batara na saịtị gị maka ọchụchọ a kapịrị ọnụ - mana ọdịnaya ahụ adabaghị - inwe njikọ ụfọdụ na isiokwu metụtara ya nwere ike inye aka jigide ndị na - agụ ya. Nwere ike chọọ ịnwe tebụl nke ndenye aha na ibe edokọbara nke na-enyere ndị mmadụ aka ịgbada na subtopics ụfọdụ ma ọ bụ isiokwu nta (ịpị ibe edokọbara bụ njikọ aka).
Nchekwa onwe ya na-emepụta ihe ndị metụtara ya na-adabere na mkpado ma ọ bụ isiokwu. Maka blog m, ana m eji ya Ozi Jetpack Njirimara na ọ bụ nnukwu ọrụ nke ịnye ndepụta nke posts ndị ọzọ metụtara mkpado ị jiri maka ọkwa gị ugbu a.
Iji Google Tag Manager, ị nwere ike mfe edemede akwụkwọ mpịakọta ihe na peeji. Ka anyị chee ya ihu ... onye ọrụ na-agagharị na ibe bụ njikọ aka. N'ezie, ị ga-achọ inyocha oge gị na saịtị yana usoro ntụgharị niile iji hụ na ọrụ a bara uru maka ebumnuche gị niile.
Iwepu ungwọ Ndị Bụ Ezigbo Aka
Cheta ọnọdụ m dị n’elu ebe m kwuru na mmadụ batara na saịtị gị, gụọ peeji ahụ, wee pịa na saịtị mpụga ịdebanye aha? Nwere ike ịme ihe ole na ole iji hụ na nke a edeghị aha dị ka ibiaghachi na saịtị gị:
Na-akpakọrịta ihe omume na pịa nke njikọ ahụ. Site na ịtinye ihe omume, ị wepụgoro mbido mgbe onye ọbịa bịara ebe ị chọrọ ka ha. Enwere ike ime nke a Pịa-ịkpọ-oku ma ọ bụ pịa-na-email njikọ dị ka mma.
Tinye interstitial redirect peeji nke. Ọ bụrụ na m pịa aha na mgbe ahụ na adaa na ọzọ esịtidem na peeji nke na egwu na click na redirects onye ahụ na mpụga na peeji nke, na ga-agụta dị ka ọzọ na peeji nke anya na ọ bụghị ibiaghachi.
Nyochaa nkwụghachi ụgwọ ọnụego gị
Aga m akwado gị ka ị gbado anya na ibiaghachi n'ọnọdụ oge kama ichegbu onwe gị gbasara otu atụ ebe a. N'iji usoro ndị dị n'elu, ị nwere ike idekọ mgbanwe n'ime nchịkọta wee hụ otu ọnụego bootu gị si dị mma ma ọ bụ na ọ na-akawanye njọ. Ọ bụrụ na ị na-ekwurịta okwu na ndị nwere oke na ọnụego bounce dị ka KPI, aga m akwado ịme ihe ole na ole na usoro ahụ.
Gwa etu onu ahia si diri ndi nwere oke ego.
Kwue ihe kpatara ị ga - eji nwee ọkwa dị mma n ’akụkọ ihe mere eme.
Gwa mgbanwe ọ bụla dị egwu na ọnụego bounce ka ị na-agbakwunye ihe na saịtị gị iji lelee njikọ aka.
Lelee usoro ibiaghachi gị na-agabiga oge ma gaa n'ihu na njikarịcha nke usoro saịtị gị, ọdịnaya, igodo, oku na-eme, na ihe omume.
Ihe m na-ekwu bụ na m ga-achọ ka ndị ọbịa bata na peeji, chọta ihe niile ha chọrọ, ka ha soro m ma ọ bụ pụọ. Onye nleta na-adịghị mkpa abụghị mbido ọjọọ. Na onye ọbịa nwere mmekọ nke tọghatara na-ahapụghị peeji nke ha nọ na ya abụghị mbido ọjọọ, Nyocha ọnụego bounce na-achọ obere ọrụ ọzọ!
Tags: Analyticsibiaghachiụba ọnụegoGoogle Analytics
Nov 29, 2009 na 1:30 PM
Ọ dịghị mgbe m chere echiche ime ihe ọ bụla dịka usoro aghụghọ ndị ahụ iji nwekwuo nyocha. Enwere m ọnụego ọnụego dị ala na saịtị m ka ọ bụrụ na ọ bụghị nnukwu nchegbu m chere na ọ bụghị naanị na m ga-echebara ya!
Banyere usoro ndị akwadoro, anọ m na-eji ngwa mgbakwunye yiri nke ahụ nwa oge ugbu a ọ na-eme ka nwekwuo ihu akwụkwọ. Enwebeghị m ọdịnaya m na-ejikọ kachasị ma.
Edem m na nso nso The Slim Girl's Box of Secrets Review